I-Fox Hatch, indawo evulekileyo, ithala elinesitayile, i-Essex yasemaphandleni
Hope End Green, England, United Kingdom
Uvimba sinombuki zindwendwe onguJenny
Ibekwe emaphandleni, ejonge kwiRoding Valley, iFox Hatch sisiseko esifanelekileyo sokuphonononga iNorth Essex okanye undwendwele iLondon kunye neCambridge. Ukulala ukuya kuthi ga kwi-4 le barn ibanzi, inesitayile esizimeleyo inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, indawo enkulu yokutyela kunye nezihlalo ezinesisa ezijikeleze isitshisi seenkuni. Amagumbi okulala axhotyiswe ngoomatrasi abenziwe ngesandla, ilinen yomqhaphu waseYiputa & iimfama ezimnyama, iitawuli ezinkulu ezimfumamfuma kunye neemveliso zeNkampani eziMhlophe, isixhobo sokomisa iinwele, iayini njl.njl. Imizuzu emi-5 ukusuka eStansted, 10 ukusuka kwisiphambuka se-M11.
Iyilwe ngabakhi abakhokelayo kwaye yagqitywa ngoJulayi '18 IFox Hatch inomgangatho opheleleyo we-1300 sq ft. Indawo yokuhlala ye-barn-style igqitywe kumgangatho ophezulu kakhulu kwaye yeyona ndawo ifanelekileyo yokurhoxa. Imigangatho ye-Oak kunye nokufudumeza ngaphantsi kuyo yonke indawo.
Ngaphandle, iitafile zepikiniki zondlalwe kwidlelo elitsha lama-apile elijonge emasimini.
Ibekwe kwindawo ezolileyo, yasemaphandleni iGreat Canfield. Ivenkile yasekhaya ikumgama oziikhilomitha eziyi-0.5 kunye neGreat Dunmow, edume ngovavanyo lweFlitch, idolophu yethu ekufutshane nje iimayile ezi-3. Apha uya kufumana iibhula, umbhaki, iikhefi, ivenkile yewayini kunye nezinye iivenkile ezizimeleyo kunye neevenkile ezinkulu. Kukwakho imakethi yangoLwesibini, iklabhu yamahlaya kunye neendawo zokutyela ezahlukeneyo, imivalo kunye nee-pubs. ICambridge yimizuzu engama-40 kuphela ngemoto kunye neLondon ngokufanayo. Ukufikelela kakuhle kunxweme lwase-Essex, ilizwe laseConstable kunye needolophu ezinomtsalane kunye neelali.
Sihlala kwindlu yasefama kwipropati kwaye sihlala sifumaneka ukuphendula imibuzo okanye ukuncedisa. Ukuba ungathanda nawaphi na amalungiselelo, undazise kwangaphambili.